China AUMAN EST-A fekitori uye vagadziri | Foton
FOTON AUMAN EST Mureza Rori yekutakura-refu kutakura
Dhiraivha Mode 4 * 2/6 * 4/6 * 2R
Kunonyanyisa Speed 106/110 km / h
Kumiswa Kuongorora Mhepo
Mberi ekisero 6.5T
Tarakita rinorema-rekushambadzira pamusika wepamusoro-soro, rinogadzirwa pamwe chete neFoton, BFDA neCummins zvichibva mukuedza kwemakore mana muEurope uye nemamirioni gumi emigwagwa bvunzo.
Foton Cummins Injini
11L uye 12L misha
Kusvikira 490hp simba kuburitsa uye 2,300Nm yakakwira torque kuburitsa
Kurumidza kutanga, dimb uye pfuura
Sangana nezvinodiwa mumamiriro akasiyana-siyana ekushanda
Inotungamira inoshanda yekuchengetedza michina
iBrake2.9 Injini Yakaputsa
Iyo disc brake inoratidzira zvirinani kupisa kwemafuta, yakanaka wading kuita uye nekukurumidza radiation. Yakakwira simba injini yekumanikidza bhureki tekinoroji: inosvika ku370pas yakakwira braking simba.
Sangana neakaomesesa Strongnt Collison Mutemo
Maumbirwo uye zvigadzirwa zveiyo nyowani-nyowani-yakasimba masisitimu muviri akagadziridzwa neCCA simulation zvinoreva kusangana neyakaomesesa ECER-29-03 mutemo wekurovera uye kuwana yakakwira kutyaira chengetedzo.
Injini ine yakakwira-yekumhanyisa uye yakakwira-torque pazasi-kumhanya, kufambisa AMT, uye yakaderera kumhanya chiyero kumashure axle inoenderana zvakakwana kugadzirisa dhiraivha kugona ne2%.
Yese- nyowani nyowani yakavakwa neEuropean inotungamira matekinoroji uye inovandudza yakakwira-magumo uye nharaunda-inoshamwaridzika inorema-basa marori kuburikidza nemajoinheni kuedza pamwe naDaimler neBenz zvinoenderana neGerman R&D standard; main module ekuvakisa akagovaniswa nemarori ese anorema-akanangana neBenz SFTP kuona mhando yemarori. Chassis ine zvese-nyowani chikuva uye yakagadziridzwa dhizaini inotora zvinhu zvitsva uye matekinoroji kudzikisa akafa uremu uye chengetedza
Iyo chassis ine zvese-nyowani chikuva uye yakagadziridzwa dhizaini inotora nyowani zvigadzirwa uye matekinoroiniti kudzikisa wakafa huremu uye chengetedza yakawanda mafuta zvichienderana neEuropean chengetedzo maitiro.